【Madawga Jimcaha 2022】 Deals Super ee Fryers-Freek Saliid
Shiilan bilaa saliid ah Black Friday 2021
Ka hel heshiisyada Jimcaha Madoow ee ugu fiican 2021 Fryers Saliid la'aan ah si aad u hesho kaaga qiimaha ugu fiican online. Jimcaha, Noofambar 26, waxaad ka iibsan kartaa shiilan hawo kulul qiimayaal aadan heli doonin inta ka harsan sanadka. Qabso
Heshiisyada ugu Fiican ee Shiilan-la'aanta Saliidda Jimcaha Madoow
Haddii aad mid raadinaysay shiilan saliid la'aan Friday BlackHalkan waxaa ah xulashada moodooyinka si weyn u dhimay qiimahooda maanta:
Eeg dhammaan dalabyada shiilan bilaa saliid ah ee Jimcaha Madoow
Haddii aad ku iman weydo dalabyadan waqtigii loogu talagalay, xusuusnow inaad heli doonto fursad aad ku raaxaysato wax badan Heshiisyada shiilan ee aan saliida lahayn ee Cyber ​​​​Isniinta.
Noocyada shiilan ee bilaa saliida ah ayaa lagu iibinayaa Black Friday
Hal sano oo dheeraad ah ayaa imanaysa waxa loogu yeero maalinta madow, iyada oo qiimo dhimis weyn lagu sameeyo inta badan alaabta. Sidaa darteed, qalabka guriga sida shiilan saliid-free Friday Black waxay noqon doontaa mid ka mid ah sheegashada weyn. Sababtoo ah waa waqtigii laga fikiri lahaa fikradaha dhabta ah ee nolosheena isbedeli doona.
Sidaa darteed, haddii aad rabto ikhtiyaarka ugu fiican ee jikada, u ogolow naftaada inay ku qaadato ikhtiyaarka aan kuu keenayno iyo in runtu tahay inay tahay guul weyn. In ka badan wax kasta sababtoo ah waa a qalabka guriga taas oo noo ogolaanaysa inaan karsano caafimaad badan, saliid la'aan iyo natiijo cajiib ah. Ma rabtaa inaad tijaabiso?
Noocyada noocyada caanka ah ee leh soo jeedintooda hadda la heli karo Jimcaha Madoow:
Cosori waa mid ka mid ah noocyada fryer-ka ee aan saliidda lahayn ee bixiya qiimo dhimista ugu fiican Jimcaha Black Friday, sidaa darteed, waa fursad weyn oo aad ku heli karto mid iyaga ka mid ah qiimo dhimis taabanaya 40% xaaladaha qaarkood.
Summadani waxay ku takhasustay shiilan-la'aanta saliidda, iyo qalabka kale ee yaryar ee jikada smart, si loo sameeyo cunto aan lahayn dufan badan iyo hab caafimaad leh. Soo-saarahani waxa uu sii waday inuu ku guuleysto abaal-marinno muhiim ah oo lagu aqoonsanayo badeecadiisa. Summadan waxaa ka dambeeya kooxda Vesync, oo ah koox Maraykan ah oo u janjeedha dhanka elektiroonigga guriga waxayna wax ku iibisa magacyo ay ka mid yihiin Etekcity, Cosori iyo Levoit.
Shiilan saliid la'aan Tefal
Bixinta Jimcaha madow
Tefal waxa kale oo uu sharad ku sameeyaa shiilan noocaan ah. Tan iyo markii ay ku dhawaaqday in ay yihiin shaaha oo kaliya oo saliid ah, waxaan ku raaxaysan karnaa natiijada sida jilicsan sida aynu ognahay. Marka lagu daro appetizers ama bilawga, waxa kale oo aad ku samayn kartaa macmacaanka. Wax ay asxaabteeda sidoo kale wadaagaan. Sidoo kale arjiga waxaad ka heli doontaa dhowr soo jeedin oo qaab cuntooyin ah.
Sida aan si fiican u ognahay, Cecotec waxay isu dhigtay mid ka mid ah noocyada ugu horreeya, waana wax aan nala yaabin. Xaaladdan oo kale, waxay la yaabban tahay shiilan aan saliid lahayn oo loo yaqaan 'multifunction'. Tani waa sababta oo ah marka lagu daro shiilan, waxay sidoo kale leedahay awood ay ku dubto ama dubto. Waxay leedahay a tignoolajiyada taageere, taas oo ka dhigi doonta in ay aad u dhaqso badan tahay oo aan saliid lahayn. Markaa natiijadu waxay noqon doontaa mid caafimaad badan. Sidoo kale, adigoo haysta laba heer, waxaad isku mar karin kartaa laba saxan. Waa mid ka mid ah moodooyinka aad ka heli karto Jimcahan Madow.
Tristar Hot Air Fryers
Philips Airfryer shiilan
Naqshad kooban oo loogu talagalay a XXL shiilan. Sidoo kale shaqadeedu waa in la isticmaalo hawo kulul si loo sameeyo suxuunta ugu fiican. Waxaad ku karin kartaa adigoon wax saliid ah ama qaado oo keliya. Sidan, waxaad ka takhalusi doontaa dufanka cuntada isla mar ahaantaana ay shiilan karto, dubi karto iyo dubi karto. Waad ku mahadsan tahay dhammaan tillaabooyinkan, waxaad badbaadin doontaa waqti badan. Markaa waxaan sidoo kale wajahaynaa nooc si cadaalad ah u dhammaystiran. Dabcan, faa'iidooyinkeedu halkan kuma dhammaanayaan sababtoo ah qaybaheeda si fudud ayaa looga saari karaa oo lagu dhaqi karaa mashiinka weelka.
Shuruudo la mid ah, Moulinex wuxuu ku sharmaa kiiskan qaabka XL. Tani waxay horeba u tusinaysaa inaan heli karno cunto macaan qoyska oo dhan. In la awoodo diyaari ilaa 6 xabbo. Sido kale waa la dubay oo waxaad u isticmaali kartaa sida dubay ahaan. Afar nooc oo cunto karin ah, waxaad heli doontaa hal sabab oo kale oo aad naftaada daryeesho meel kasta iyo goor kasta oo aad rabto.
Saliida Ninja Free Fryers
Sannad kasta bisha Noofambar waxay timaadaa mid ka mid ah maalmaha la filayo. Waxa loogu yeero Jimcaha Madoow ama Jimcaha Madoow waa la midabeeyay si nolosha loo siiyo qiimo dhimis badan. Qaar ka mid ah iibsiyada kirismaska ​​​​hore ee sanadkan waxay u muuqdaan inay xitaa ka duwan yihiin iyo ikhtiyaarka internetka ayaa noqda mid aad iyo aad u badan oo nolosheena ah. Waa in aad is diyaarisid sababtoo ah Jimcaha 27-ka ayaa noqon doona maalinta ugu weyn, taas oo ah, Black Friday 2021. In kasta oo ha la yaabin haddii dhawr maalmood ka hor aad ku aragto qaar ka mid ah dalabyada dukaamada aad jeceshahay.
Ma mudan tahay inaad soo iibsato shiilan bilaa saliid ah Jimcaha Madoow?
Runtii waxaa jira heshiisyo iyo qiimo dhimis lagu shiilo hawada kulul sanadka oo dhan uma baahnid inaad sugto Jimcaha Madoow ama Cyber ​​​​Isniinta si aad qiimo wanaagsan ugu iibsato. Waxa run ah in maalintaas badeecooyin badan oo qiimo jaban leh ay xoogaysan yihiin oo aad haysato fursado badan oo aad ku barbardhigi karto dalabyada oo aad doorato fryerkaaga cuntada.
Dhinaca hoose ayaa ah in uu jiro mug badan oo iib ah oo ay u badan tahay in aad isku aragto in aad gabaabsi noqon doonto ama ay jiri doonto dib u dhac ku yimaada shixnadaha, gaar ahaan sanadkan mawduuca masiibada ah.
Haddii aad rabto inaad sugto maalintaas si aad lacag u badbaadiso, waxaan kugula talineynaa inaad qorto moodooyinka adiga ku xiisaynaya iyo qiimahooda dhowr toddobaad ka hor, si aad u ogaato qiimo dhimista dhabta ah ee mid kasta.
Habka ugu wanaagsan ee lacag lagu badbaadiyo waa inaad u isticmaasho maalintan si aad u horumariso wax iibsiga kirismaska, ha ahaato naftaada ama hadiyad ahaan. Haddii aadan helin waxaad raadineyso ama aad seegto maalinta waxaad heli doontaa fursad kale Cyber ​​​​Isniinta.
Waa maxay sababta shiilan-la'aanta saliiddu u mudan tahay in la iibsado Jimcaha Madoow
Haddii aad rabto inaad iibsato a shiil aan saliid lahayn wax ka yar Marka loo eego kharashka badan, waxaad ka faa'iidaysan kartaa Black Friday. Maalintaan waxaad ka heli doontaa noocyada fryer-ka ugu fiican iyo moodooyinka leh qiimo dhimis aad u muhiim ah. Habka aad u soo iibsan karto qalabkan si aad ugu raaxaysato dhadhanka ugu fiican ee cuntooyinka shiilan, laakiin aanad isticmaalin dufan naaxisa oo caafimaadka waxyeello u leh.
Midna ma iibsan kartid fryer ka caafimaad badan iyo in ay ku kordhiso kalooriyo yar cuntadaada, laakiin sidoo kale waxaad badbaadin doontaa adigoon saliid u baahnayn, uma baahnid inaad ka walwasho heerkulka, waxay ka ilaalisaa qulqulka saliidda, aad bay u nadiifsan tahay, waxay u baahan tahay dayactir yar waxayna u fududahay nadiifinta. iwm.
Talooyin ku saabsan doorashada shiilan qoto dheer oo aan saliid lahayn Jimcaha Madoow
Si baaskiil dooranaya shiilan bilaa saliid ah oo wanaagsan Jimcaha Madoow, waa inaad xisaabta ku dartaa talooyinka qaarkood:
Waxa ugu horreeya waa in la aqoonsado shiilan aan saliid lahayn oo aad u baahan tahay. Ma aha oo kaliya samaynta iyo qaabka, laakiin awoodda. Qofka keligiis ah ama lammaane ah lama mid aha qoyska u baahan inay hal mar cunto badan sameeyaan.
Markaad go'aansato moodooyinka gaarka ah ee lagu hagaajin karo baahiyahaaga, markaa waxaad samayn kartaa shaandheyn cusub iyadoo loo eegayo miisaaniyada aad haysato. Markaa waxaad xaddidi kartaa kaliya laba ama saddex ka mid ah.
Hadda oo aad hoos u dhigtay lambarka, waxaad ka baari kartaa moodooyinka shiilaha ee bilaa saliidda ah Jimcaha Madoow ee dukaamada kala duwan oo waxaad barbardhigi kartaa qiimaha si aad u go'aamiso heshiiska ugu fiican ee farahaaga.
Marka aad caddeyso, waxaad bilaabi kartaa ugaarsiga baayacmushtarka ka hor inta uusan dhammaan.
Maxaa qiimo dhimis ah oo aan ku heli karnaa shiilan bilaa saliid ah Jimcaha Madoow?
Shiilan bilaa saliid ah jimcaha madow waxay noqon doontaa nasiib. Sababtoo ah noqoshada qalab si buuxda u cusub, waxaan heli karnaa qiimo dhimisyo casiir leh. Taasi waxay naga dhigi doontaa inaan ogaano inay tahay waqtigii saxda ahaa ee la heli lahaa qalabkan oo kale. Si aan u bilowno waxaan dhihi doonaa waxaa jira noocyo badan oo aad u kala duwan oo aan haysanno shiilan aan saliid lahayn. Maadaama qaarkood ay yihiin kuwo aasaasi ah oo is haysta halka kuwa kalena ay wadaagaan fursado badan oo qaab ahaan ah Hababka karinta.
Markaa taasi waxay tidhi, waa inaan ogaanaa in qiimo dhimista ay sidoo kale kala duwanaan karto. Shaki la'aan, moodooyinka qaarkood waxay ka bilaabi karaan 25% marka aan ka hadalno moodooyinka jaban iyo hel qiimo dhimis ilaa 45%., ama xitaa wax ka badan oo ku jira xulashooyinka kale ee ka qaalisan. Inta u dhaxaysa, waxaan sidoo kale heli karnaa 30% oo aan xumaan haba yaraatee, si aan u awoodno inaan bixinno qadar ka hooseeya waxa aan maskaxda ku hayno frying our.
Dukaamada dhimaya shiilan bilaa saliid ah Jimcaha Madoow
Amazon: Shaki la'aan, Amazon waa mid ka mid ah dukaamada wax iibsiga ee ugu horreeya. Sababtaas awgeed, waqti sida Black Friday, lagama tagi karo. Dhexdeeda waxaan ka heli doonaa dhammaan noocyada noocyada iyo dabcan, oo leh qiimo dhimis succulent oo u dhexeeya 20% ilaa in ka badan 40%.
Maxakamada IngriiskaQalabka guriga ayaa sidoo kale ah mid ka mid ah hantida ugu weyn ee dukaanku ay tahay inuu bilaabo dalabyadiisa waaweyn iyo noocyada caanka ah ee caanka ah. Diyaarso sababtoo ah hubaal waxaad heli doontaa moodooyinka ugu dambeeyay oo leh qiimo dhimis lama ilaawaan ah.
Wareejisay: Ma jirto wax ka dambeeya marka ay timaado heshiisyada waxayna durba ka bilaabaneysaa 13% qaar ka mid ah shiilanyada saliida ee Friday Black Friday. Laakin waxa ay sii wadi doontaa in ay la yaabto marka maalinta weyni soo dhawaato,maadaama sidaan horay uga faalloonnay, waa mid ka mid ah shayada iibka ugu badan.
mediamarkt: Waxay hore u bixisay qiimo dhimis 15 euro iyo inta lagu jiro Black Friday weli waa la kordhin doonaa. Mid kasta oo ka mid ah dukaamada ayaa bixiya xalal kala duwan laakiin dhammaantood waxay ku adkaysanayaan noocyada caanka ah ee caanka ah iyo samaynta nolosheenna wax yar oo fudud oo qiimo dhimis ah.
Lidl: Shiilan la'aanta saliidda Jimcaha Black ee Lidl sidoo kale waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee aan haysano. Maadaama ay tahay nooc aad u dhammaystiran oo aan labadaba ku duban karno, bunni ah, ku karinno ama kuleyno, oo ay ku jiraan xulashooyin kale. Intaa waxaa dheer, had iyo jeer qiimo wanaagsan marka loo eego hadda, waxay noqon doontaa mid ka hooseeya mahadsanid qiimo dhimis. Midkee baad dooranaysaa?
Black Friday shiilan saliid-free: index iibka
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Shiilan bilaa saliid ah Black Friday 2021